I-Rhydwen-i-Riverside Cottage- ilala i-3
I-Rhydwen, ikwikona ethe qelele yelali kufutshane nendlela yeenyawo eya e-Aran Fawddwy elunxwemeni lwe-Afon Twrch. I-cottage inika indawo yokuhlala efanelekileyo kwabo bafuna isiseko sokuhlola indawo entle ejikelezileyo.
I-semi-detached cottage ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye inika ikhitshi evulekileyo yesicwangciso, indawo yokuhlala kunye neyokutyela enobushushu obuphantsi kunye nesitshisi selog esithambileyo. Kukho igadi yabucala ecaleni enezihlalo kunye nokufikelela ngesango eliya kunxweme lomlambo wabucala
Isiqithi esineendawo zokuhlala ezimbini, sahlula indawo yasekhitshini kwindawo yokuhlala. Ikhitshi lineoveni enye enehobho, imicrowave kunye nefriji ephantsi kwekhawuntara enendawo encinci yesikhenkcisi. Indawo yokutyela inezihlalo zabathathu kwitafile eyongezelelweyo yokutyela.
Kukho ukufudumeza okuphakathi kwipropathi yonke kwaye unikezelo lweelogi lubonelelwa kwisitshisi selog.
I-Rhydwen ine-TV yesikrini esisicaba kunye ne-Wi-Fi kuyo yonke i-speaker engenazingcingo yokusasazwa komsindo. Sikwabonelela ngokhetho lwemidlalo kunye neencwadi.
Izitebhisi ziqhelekile kwisitayile sepropathi. Zikhokelela ngqo kwindawo yokuhlala kwaye zimxinwa kwaye zithe nkqo.
Igumbi lokulala eliphambili linomandlalo wenkosi kunye ne-Casper memory foam umatrasi (inkxaso eqinile), indawo encinci yokuxhoma kunye needrowa. Kukho ibhedi enye kwigumbi lokulala lesibini elinewodrophu kunye nesifuba sedrowa.
Igumbi lokuhlambela lineshawa yamandla ombane kwindawo ebiyelweyo yeshawari enamacala amane.
I-Llanuwchlyyn ibonelela ngesiseko esigqibeleleyo sokuphonononga i-LLyn Tegid, i-Snowdonia kunye neeNtaba zaseBerwyn.
Olona fikelelo lukufutshane kwiLake liseLlangower ekumgama oziikhilomitha ezi-2 ukusuka kwindlwana. Ukuqashiswa kwezixhobo ze-Watersport ziyafumaneka eBala, engaphantsi kwemizuzu eyi-15 ngemoto.
I-pub yelali, i-Yr Eagles ibonelela ngokutya okubalaseleyo kwi-pub kwaye iphinda kabini njengevenkile emini ethengisa uluhlu olubanzi lwezibonelelo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Llanuwchllyn